WAXAAN KU KORAAN KALSOONIDA GURIGA: TALOOYIN WAX KU OOL AH - KACSANAAN KOBCIN
Nadaafad kasta oo niyadjab leh ayaa isku deyeysa sannad kasta si loo kordhiyo tirada "deganayaasha" beerta. Riyadii loo qoondeeyey waa in la kobciyo wax dabiici ah - wax aan ka korin gobolkan beeraha gobalka. Taasi waa sababta ay beeralaydu isku dayayaan in ay u koraan mid ka mid ah miro sida ciriiri on dalkooda.
Miro badani waa mid caan ah, gaar ahaan Bariga Yurub. Laakiin thanks to dadaalka ah ee jajabiyey casriga ah waxaa suurtagal ah in la abuuro noocyo noocyo ah oo adkeysan kara xitaa dhaxan ugu xoogan jiilaalka iyo dhaxan guga.
Arrinta sii kordhaysa ee dhaqankan, wax walba waa wax sahlan, laakiin waa inaad xasuusataa sifooyinka dareenka ah. Haddii aad ilowdo waxyaabahan yar yar, waxaad gabi ahaanba burburin kartaa geed.
Waa lagama maarmaan in la dhigo bilawga geed ka dhagax. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad Gagaashid guriga, dheriga daaqadaha. Si aad u hesho abuurka aad doonaysid, waxaad u baahan tahay inaad iibsato ciribtirka lafteeda, cun cun, adoo iskaga tuuraya isla waqtiga, sababtoo ah waxa aad soo iibsatay midhaha laftiisa.
Kadib markii aad lafaha heshay, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u biyo raaciso biyo oo qalaji. Waxaa fiican in aan la qaadan mid ka mid ah abuur ah, laakiin dhowr, si marka dambe waxaad u dooran kartaa ugu caansan iyo ugu caafimaad badan.
Ka hor intaan la dhicin miraha waxay u baahan yihiin in la sumo. Si arrintan loo sameeyo, ku rid dhammaan walxaha beerto ee xal daciif ah ee kiriimiga muddada 48 saacadood.
Ka hor inta beerto waa in lagu diyaariyo dheriga dhulka. Waxaad iibsan kartaa ciidda khaaska ah, adigana waad samayn kartaa, adoo isku dardaraya humus, dhulka dushiisa, dhuxul iyo ciid.
Diidi abuurka si qoto dheer ah 1.5 - 2 cm ee carrada qoyan, ka dibna daboolay dherigii leh filim.
Dhibbanaan ku filan dhaqanka kulaylka-jecelSidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in ay Gagaashaan abuurka ah oo ay diirran tahay - on windowsill on dhinaca qorraxda u dhow batoonka.
Waxaad dhejinta si toos ah ugu dhejin kartaa qalabka batteriga si aad u hagaajiso. Caleemaha waa in loo qoondeeyo 1 - 2 asbuuc. Waa wax aan macno lahayn si aad ugu dhajisid sapling dherer dheer. Inta lagu jiro xilliga biqilka oo dhan, mararka qaarkood waa lagama maarmaan in biyaha lagu daro dheriga dhulka si aysan ciidda u qalajin wax badan.
Waxaa jira hab kale oo lagu dhalan karo miraha cagaaran - suufka. Si taas loo sameeyo, waa inaad ku duubtaa laf kasta lakulanka suufka qoyan, ku rid boorso balaastig ah kuna rid meel diiran.
Mararka qaar waxaa lagama maarmaan ah in la furo baakadka si ay qoyaan dheeraad ah u soo baxaan ka hortag caaryada. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la qoyo dhogorta suufka mararka qaarkood haddii uu qalalo.
Munaasabaddan oo aan la helin sprouts ka dib 10-15 maalmood, habka waa in lagu celiyaa dhagxaan cusub. Laakiin haddii ilaha ugu horreeya ay ka muuqdaan dusha dhulka ama suufka, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro filimka dheriga, "sprouts" waa in lagu beeraa dhulka.
Caleemaha lafaha lafdhabarku waa kuwo aad u adag, sidaas darteed haddii aan wakhtigooda la saarin, dhirta yaryar ayaa dhiman doonta. Ka qaad lafta Waxaad isticmaali kartaa irbad ama maqas yar.
Haddii cirbadaha aan la aqbalin si looga saaro, markaa waa in laga baxaa dhulka, lafta laftiisa isaga laftiisa biyo diirran oo ku duub foornada.
12 ilaa 15 saacadood ka dib, dufka lafuhu wuxuu noqonayaa mid jilicsan, kaas oo u oggolaanaya inuu ka saaro dadaal yar. Mararka qaarkood lafuhu way baaba'aysaa.
Qalabka cagajuglaha ayaa si aad ah u koraya iyo horumarinta, sidaas darteed soo baxa caleemaha kasta biqil kasta waa in loo qoondeeyey dheriga gaarka ah. Dhirasho caafimaad leh oo ah midab cagaaran oo qurux badan, dabacsan, 10-15 cm dheer.
Haddii yellowness u muuqday caleemaha, tani waxay muujinaysaa maqnaan la'aan meel ama ciid.
Marka geedo yihiin xoog leh, iyo xagaaga ayaa yimid, waxaa habboon in la siiyo sunbathing in dhirta dhallinyarada ee cidhiidhi ah qaybo.
Waa lagama maarmaan in la qaato dheriyada qorraxda mararka qaarkood, taniyo, dhab ahaantii, dhirta aqalka dhirta lagu koriyo ayaa gubi kara saameyn weyn oo ah shucaaca ultraviolet, ama xitaa qallal.
Sidaa darteed, inta lagu jiro maalmaha ugu horeeya, hooska waa in la sameeyaa ka badan dheriyada, iyo dhirta naftooda waa in la dhigo mid on windowsill qoraxda, ama balakoonka, ama barxadda.
Inkasta oo uu dhirta ku jiro marxaladda daaqsinka firfircoon, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo kicin dheeraad ah oo horumarineed iyada oo loo marayo codsiga bacriminta noolaha iyo macdanta.
Nidaamka asaasiga ah ee cidhiidhiga waa horumar aad u firfircoon, sidaas darteed dheryaha for cobs waa inuu ahaado mid ballaaran, iyo ciidda waa in badan.
Marka Oktoobar - Nofembar yimaado, ka dibna geedo cagaaran ayaa loo baahan yahay in laga saaro qol ay heerkulku ku kala duwan yihiin inta u dhaxaysa +7 iyo +30 C.
Laguma talineynin in dhirta lagu dhejiyo qolka hoose ama qolka hoose, maaddaama dhirta ay dareemayaan nalal la'aan ayna u dhaqmi doonaan si haboon.
Waqtigaan, sprouts waa in la siiyaa qadar ku filan oo qoyaan ah, sidaa daraadeed hareeraha jirkaaga waxaad u baahan tahay in aad jiifsato mulch qaab balka qoyan. Wakhti ahaan waa lagama maarmaan in la hubiyo heerka qoyaanka ciidda. Haddii dhulka uu qalalan yahay, ka dibna dhirta u baahan tahay in la waraabiyo. Waxa kale oo muhiim ah in si nidaamsan loo buufiyo duurka ayaga oo leh biyo.
Guga hore, dhirta dhallinyarada ah waxay u baahan yihiin in lagu dhex marsado dheriyo waaweyn, halkaasoo aad u baahan tahay inaad buuxiso ciidda cusub ee bacrin ah. Qalitaanka ka dib, seedling kasta waa inuu si fiican u waraabiyaa oo ku rido meel la iftiimiyo.
Tallaabada xigta ee beerista ciriiriga ayaa ah sameynta geedo horeba uga soo baxa geedo cagaaran. In geedi socodka sameynta mustaqbalka taaj loo baahan yahay jiido seedling heerka 0,4 - 0.5 m dusha sare. Taas ka dib, geedkii yaraa wuxuu bilaabi doonaa laanta.
Si formation of laamood ee amarka labaad si aad u sugto ilaa caleemaha apical gaadhay dherer ah 30 - 40 cm, iyo caleemaha naftooda u baahan yihiin inay ka tago 2 - 3 gogo '.
Dheeraad ah, nidaamkani waa soo noqnoqonayaa, taas oo ah, waxaad u baahan tahay inaad dibadda uga baxdid 2 - 3 oo baxda oo aad isku jiido. Sidaa daraadeed, qaabka wareegsan wuxuu sameyn doonaa agagaarka geedka, iyo dhirta lafteeda waxay gaari doontaa dherer ah 1.5 m. Persimmon waxay bilaabi doontaa in ay ubaxdo 3 ilaa 4 sano kadib. Fruiting waxay bilaabi doontaa 5 - 7 sano ka dib marka geed lagu beddelo dhulka dhulka.
Kala bedelka horeba geed weyn oo soo socota samee guga, oo meesha ka hooseysa duufaanka waa in si wanaagsan loo iftiimaa oo aan dabayl lahayn.
Dhibbanaan - dhaqanka qoyan ee qoyan, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad biyo ku dhasho xitaa geedo caan ah.
Waxaa muhiim ah in aanad dhicin geedka. Khabiiradu waxay sidoo kale ku talinayaan in lagu buufiyo caleemaha marxaladda ugu horreysa ee beerashada dhul furan. Persimmon waxay billaabmaysaa inay ubaxdo, badanaa Juun. Quudinta waa in la sameeyaa ka dib markii lagu tallaalay xilliga firaaqada firfircoon. Cunto-karinta - 2 jeer bishii, iyo qiyaasta nitrogen waa inay ahaataa mid aad u yar.
Iyadoo bilawga xilliga jiilaalka, geedaha waa in laga ilaaliyaa dhaxan daran, sidaa daraadeed dhadhanka ma qaboojiyo. Waraabinta waa inay noqotaa mid marxalado ah, biyo waa inay ahaataa heerkulka qolka.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ku buufiso caleemaha. Miraha of dhaxan cadaadis ma aha mid cabsi leh, sida hoos ku saameynta heerkulka hoose ee miro ayaa yarayn doona tirada tannins.
Si aad u koraan warshad qalaad sida ciribtirka ma aha mid aad u adag, haddii aad raacdo xeerarka hore u jiray.
Kaliya akhri macluumaadka la bixiyey, wax walbana waa ay ku dhici doonaan. Waxaannu kuu rajaynaynaa inaad ku guulaysato hawlahaaga.